सरकारले आइफालाई ६५ कराेड दिने निर्णयप्रति रवि लामिछानेकाे बिचार यस्तो छ (भिडियो ) - सुदूर नेपाल
सरकारले आइफालाई ६५ कराेड दिने निर्णयप्रति रवि लामिछानेकाे बिचार यस्तो छ (भिडियो )
काठमाडाैं : सरकारले ६५ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेर भारत बलिउडको एउटा चर्चित ‘आइफा’ अवार्ड नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय बारे जानकारी दिए लगत्तै आइफा अवार्ड बारे टिका–टिप्पणी शूरु भएको छ । इन्टरनेशनल इभेन्टहरु नेपालमा हुनु खुसीको कुरा हो तर, तपाईले मैले तिरेको करको पैसा दिएर एउटा बिशुद्ध नाफामूलक भारतीय इभेन्ट कम्पनीलाई एक रातको इभेन्टका लागि करिब ६५ करोड दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा मन्त्री परिषदका कुनै सदस्यलाई आश्चर्य लागेनछ भन्दा पो आश्चर्यमा परियो ।पर्यटन बोर्ड र महानगरपालिका सह–आयोजक रहेको आइफा अर्वाडका लागि आयोेजकले मागेको करिब ४५ करोड नेपाली रुपैयाँ , त्यसबाहेक हवाई खर्च, होटल खर्च, सुरक्षा खर्चमा अर्को २० करोड जान्छ । यसरी ६५ करोड खर्च गरेर गरिएको आइफा अर्वाडले नेपालको पर्यटन प्रचारमा ठूलो योगदान दिन्छ भनेर मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका इभेन्ट कम्पनीले कार्यक्रम आयोजना गरुन्, विज्ञापनदाताहरुले उतm कार्यक्रमको प्रायोजन गरुन् र नेपाल पर्यटन बोर्डले २०–३० लाख लजिस्टकिका लागि दियोस् नेपाल वायुसेवा निगमले भारी छुटमा प्लेन चाटर्ड गर्न दियोस् ।यतिसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुहाउँछ । त्यसमाथी त्यस्तो धनी र पावरफुल भारतीय दुतावास छ । उसको अर्थतन्त्रका लागि १ अर्ब ठूलो कुरा पनि होइन, गरोस न सहयोग । नेपाल–भारत मैत्री वाला संस्था पनि छ क्यारे ! गरिब नेपालीले खाडी लगायतका देशमा पसिना बगाएर धानेको अर्थतन्त्र अनि जनताको करबाट सरकारको ढुकुटीमा राखेको पैसा । करोडौँ रुपैयाँ, त्यस्ता धनी–धनी भारतीय कलाकार, जया पर्दा, गुल्सन गोबर, गोविन्दा, कट्रिना कैफ, आलिया भट्ट, करिना कपुर, फैफ अलि खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खानका लागि के खान दिने ?आइफा जस्तो अवार्ड कुनै देशको पर्यटन प्रोमोशनका लागि होइन ती देशमा रहेको भारतीय दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन दिन आयोजना हुन्छन् । बरु नेपालमा सुटिङ गर्न आउने हलिउड, वा बलिउडकै पनि फिल्मलाई ट्याक्स फ्री गरिदिउ, यति पैसा खर्च गरे १०/१५ प्रतिशत रिफन्ड गरिदिउ, नेपालको मनोरम दृश्यहरु समावेश गरिए अझ बढी डिस्काउन्ट दिउ ।
यसरी चाँही नेपालको प्रोमोशन हुन्छ । एक रातको अवार्ड सेरोमनीले नेपालको पर्यटन चाँही होइन यो आइडिया दिनेहरुको घर, जग्गा, गाडीको चाँही एकै रातमा विकास हुन्छ । नेपाल चिनाउने कयौ कलात्मक चलचित्रहरुले सरकारको सहयोग पाएनन् ।एक सा एक क्षमतावान फिल्म मेकरहरु छन् यो देशमा । तिनको सिनेमाले सहुलियत वा ऋण पायो भने औस्कार अवार्डसम्मको यात्रा तय गर्न सक्छन् । पहिचान बोकेका मौलिक कयाैं जनजाती चलचित्रहरु छन् ।तिनलाई खोई सहयोग ? खोई प्रोत्साहन ? अर्वाड कै कुरा गर्दा नेपालको राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने राष्ट्रिय चलचित्र अर्वाड राष्ट्रपति ज्यूले समय दिन नसक्दा ३ बर्षदेखि हुन सकेको छैन रे । जया प्रदा भन्दा कयौ गुणा योगदान छ भुवन चन्द, बसुन्धरा भुषाल, चैत्यदेवी, सुभद्रा अधिकारीहरुको । यी महान कलाकारहरुलाई सम्मान पहिला गरौँ । मिथुन, गोविन्दा भन्दा कयौँ गुणा गौरवशाली छन् हाम्रा राजेश हमाल, भुवन केसी र शिव श्रेष्ठहरु । कट्रिना, करिना, प्रियंका चोपडाहरुको भन्दा राम्रो अनुहार हामीलाई हाम्रै प्रियंका कार्की, सामाज्ञी, नम्रता श्रेष्ठ, केकी अधिकारीहरुको लाग्छ । सलमान, साहरुख, अमिर खान भन्दा कम ह्याण्डसम छैनन् हाम्रा अनमोल केसी, प्रदिप खड्का, दयाहाङ राई, विपिन कार्कीहरु । अहिलेसम्म यो पैसा दिइसकिएको छैन, त्यसैले यो निर्णय फिर्ता लिन मज्जाले सकिन्छ सरकार । विभिन्न देशमा भएको आइफा अवार्ड नै हेरेर ती देशमा पर्यटक गएको एउटा मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई भेटन् चाहान्छ् । चिया खुवाउने जिम्मा मेरो । हो ग्ल्यामर वल्र्डमा आइफाको ठूलो नाम छ, तर यो एउटा विशुद्ध नाफा मूलक निजी कम्पनीले आयोजना गर्दै आएको कार्यक्रम हो ।यसका प्रायोजकहरु छुट्टै हुन्छन्, जसले करोडाँै करोडको व्यवसायिक विज्ञापन गरेर कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्छन् । यो अर्वाड भारतीय दर्शक लक्षित अर्वाड हो । यसले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ग्लोबल प्रभाव होइन भारत केन्द्रीत प्रचार गर्छ । भारतका पर्यटकलाई पर्यटक नमान्ने भनेको होइन, प्लस आइफाको भव्यता र लोकप्रियतालाई कम आँकलन गरेको पनि होइन । नेपालमा भारतीय सिने स्टारहरु आउँदा नरामाइलो हुने झन कुरै छैन । आइफाले हाम्रो टुरिजमलाई इन्डियामा वोल्र्ड फेमस बनाउँछ, त्यो पनि माने तर, यो मुलुकको प्राथमिकता त्यो होइन । हो, नेपाल सरकारले आयोजना स्थल, सुरक्षा, भारतीय कलाकारहरुलाई सम्मान, दिवा वा रात्री भोजको आयोजनासम्म गरोस् ।यो देशमा भूकम्प पीडितहको घर बनाउनै बाँकी छ, सम्पदाहरु बनाउनै बाँकी छन्, बझाङ बाजुरा, कालिकोट, हुम्ला, जुम्लामा स्कुल, अस्पताल खोल्नै बाँकी छ । ६५ करोड हामीलाई नै चाहिन्छ । पछि धनि भएपनि आइफा, जीसिने, फिल्मी फेयर मात्र होइन ओस्कार नै गरौला नि हुन्न ? क्लिन फिडका लागि सरकारलाई तारिफ गरेको सेलाउन नपाउँदै आइफामा आलोचना गर्न पटक्कै मन छैन । त्यसैले सरकार यो निर्णण फिर्ता लिइयोस ताकी फेरी दिल खोलेर धन्यवाद भन्न सकौँ ।कुरा नेपाली करदाताको ४० देखि ६५ करोडको हो । आइफाले ४० करोड माग्यो त्यो उसको कुरा हो । उसको भव्य कार्यक्रममा त्यो भन्दा बढी खर्च हुन्छ होला माने ।क्यानाडा, श्रीलंका आदी देशले पनि आइफा आयोजना गरे त्यो पनि माने । त्यो ति देशको क्षमताको कुरा हो ।
Previous Post: अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकीलाई राष्ट्रपतिको एक्कासी आयो फोन,अशोकले भने मेरी आमा हुन-भिडियाे
Next Post: धेरै कमाउन नसकेपनि रत्नपार्कमा रातपरेपछि सुरु हुन्छ सर्मिलाको व्यापार (भिडियो)